केपी गुट बाहेक अरुले जागिर खान नपाइने हो ? – Nepalpostkhabar
केपी गुट बाहेक अरुले जागिर खान नपाइने हो ?
नेपालपाष्ट खबर । १८ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०६:४५ मा प्रकाशित
आस्था फरक राखेकै कारण कसैलाइ पनि काँखा र पाखा लगाउने हो ? नगरपालिकाका नगरप्रमुख र निर्मित प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत चिर स्थायी पद हो । राजनीति सधै एक नाँस हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर भेरी नगरपालिका तयार हुनुपर्छ । हिजो मात्र केही करारमा कार्यरत कर्मचारीलाइ फरक विचार राखेकै कारणले किन कारवाही नगर्ने भन्दै एक पत्र थमाइएको छ ।
अनौठो कुरा त के छ भने जसलाइ नगरपालिकाले कारवाही किन नगर्ने भनि पत्र थमाएको छ , यहाँहरु दुइ हप्ता अघि केपी ओली समुहमा रही पत्रकारको जिल्ला संयोजकमा मनोनित हुनुभएको थियो । सो समयमा बधाइ दिन हतार , हतार तिनै व्यक्तिहरु आज कारवाहीका लागि चिठी थमाउदै छ । अहिले यो कार्यको सर्वत्र विरोध भएको छ । मन पर्दा सम्मा सवै ठिक , मन नपर्दा सवै बेठिक भन्ने परिपार्टी सवै भन्दा गलत कदम भएको सामाजिक सञ्जालामा देखा परेको प्रतिक्रियाले बताउँदै आएको छ । जसले कारवाहीका लागि पत्र काटेको छ , उनै आफै पनि कुनै नम्वरी दलको नजिक भएर त्यहाँ टिकेका छन् ।
उपसचिव आएर नगरपालिका चलाउदा तिनै व्यक्तिको टाउको दुख सकि नसकी न्वारण देखिको वल लगाएर सरुवा गरिएको छ । किन यस्तो गरिन्छ ? आफू अनुकूलको भए मात्र सवै ठिक , तर फरक विचार धारा राख्न वितिकै भित्तामा पुर्याउने यो तरिका कुनै शव्दले पनि समर्थन गर्न सकिदैन । यस्ता खालका क्रियाकलापले विगतमा भेरी नगरपालिकालाई परेको दुख , समस्य फेरी सतहमा आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । विकासको नाममा भर्खरै दिशा देखाउन लागेको र आलोचनाको भारी पगरी गुथेको भेरी नगरपालिकाले यस्ता खालका गतल परिपार्टी बन्द गर्न हामी आग्रह गर्दछौँ ।